Akụkọ kacha ọhụrụ banyere Federal Ihe si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Njirimara Federal
Ndị okenye nọ na-agba ndị isi obodo ume ka onyeisi obodo buhari bu ndi isi oru
Ndi Koria nke ndi okenye (YCE) onwa Thursday nyere onye isi ochichi Muhammadu Buhari aka ikwuputa ndi isi oru ya n'ihi na ebubo ha ekwenyeghi igbochi igbu mmadu na mba.
Onye isi okwu kwadoro: Ihe mere m ji akwado nhazi
Onye isi oche nke ụlọ ndị nnọchiteanya, Hon Yakubu Dogara, kwupụta nkwado maka nyocha na ịhazigharịa usoro gọọmenti etiti dị ugbu a iji mee ka a mara na ọ bụ ndị Niger niile.
Ụlọ ndị na-anọchite anya chọrọ 83 Maritime Academy mkpara sacked
Kọmitii Ụlọ nke Nchebe Mmiri, Ozi na Nchịkwa gwara ndụmọdụ nke Maritime Academy of Nigeria (MAN) ka ọ rụọ ọrụ 83 ndị ọrụ na 2016 na-enweghị usoro.
Ogbugbu na-enweghị isi, a ga-eme ihe ike - President Buhari
President Muhammadu Buhari kwughachiri nkwa ya iji kwusi ihe ike nke mejuputara ufodu mba a n'oge ndi a.
OBI na-eyi egwu ijide President Buhari n'elu onyeisi obodo NIA Rufai Ahmed
Òtù Na-ahụ Maka Ndị Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ, HURIWA, jụrụ President Muhammadu Buhari ka o dozie esemokwu gbara gburugburu nhọpụta nke Abubakar Rufai Ahmed dị ka Onye isi oche nke National Intelligence Agency, NIA, na nyocha nchitere anya, bụ Babagana Kingibe, onye isi ọrụ ya, Abba Kyari na onye a họpụtara ọhụrụ na-ekwu na ọ bụ omume rụrụ arụ.
Enweghị atụmatụ imebi akụkụ ọ bụla nke Nigeria - President Buhari
President Muhammadu Buhari Thursday na Abuja kwuru na iwu nke Gọọmenti Gọọmentị chọrọ ka ọ bụrụ ihe nzaghachi maka esemokwu n'etiti ndị na-azụ anụ na ndị ọrụ ugbo na mba ahụ abụghị iwu ịchị mba ọ bụla.
South East senators kpochapuru ikpe-azu President Obasanjo banyere Buhari
Ulochi South East Caucus nke Senate Wednesday weputara okwu ndi isi President Olusegun Obasanjo kwuru banyere ochichi nke President Muhammadu Buhari ma kwuputa na mkpebi a gosiputara onodu ya na ochichi Buhari.
NEITI na-azoputa ndi oru omuma ihe site na ida - Senate
Onye isi oche, Kọmitii Senate na Federal Character and Inter-Governmental Affairs, Senator Tijjani Yahaya Kaura, kwuru na ntinye aka NEITI na njikwa nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe dị iche iche nke Nigeria azoputala ngalaba ahụ site na ọdịda dị nso.
FRSC iji belata ihe mberede okporo ụzọ site na 50% na 2018 - Boboye Oyeyemi
Onye isi agha nke Corps Marshal, Federal Road Safety Corps (FRSC), Mr Boboye Oyeyemi, na-ekwu na ozu ahụ ga-ebelata ọnụọgụ abụọ nke 50 na okporo ụzọ okporo ụzọ ma ọ bụrụ na ego eji kwadoro maka ụlọ ọrụ ahụ dị mma.
Gọvanọ Fayose ratara President Buhari maka ịhọpụta onyeisi NIA ọhụrụ
Gọọmenti Ayodele Fayose nke Ekiti State agbaghawo President Muhammadu Buhari banyere nnọchighari nke National Conselligence Agency (NIA) Director General, onye nnochite anya Ayo Oke, na Ahmed Rufai Abubakar, onye ikwu ya, na-ekwu; "Onye isi oche ahụ egosipụtalala ndị Niger na ọ bụ onye ndú na-enweghị nchegharị, onye na-adịghị eche banyere mmetụta nke ndị si n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ."
2018: SGF Boss Mustapha na - achọ ngwa ngwa nke mmefu ego
Onye odeakwụkwọ nke Gọọmenti Federation (SGF), Boss Mustapha, rịọrọ Mgbakọ Mba ahụ ka ha mee ngwa ngwa 2018 iji zere mmezu iwu na-adịghị mma.
Ụlọ Reps kwụsịrị ịgbagha na ebubo NCC na-akwadoghị iwu
Ụlọ nnọchiteanya nọ na Tọzdee wepụrụ ụtụ na-akpọ maka nyocha banyere ebubo na ndị ọrụ na NCC Communications NCC, na-akwadoghị iwu.
Ụdị akụkọ Federal na - emetụta ihe ndị mba - El-Rufai
Onye gọọmenti nke Kaduna State, Mallam Nasir el-Rufai, n'elekere nke asatọ na Ibadan kwuru na Federal Character in the body's politics, na-egbochi mmepe mba.
Zidane Zinedine Real Madrid na-ekpochapụ 'ekworo' nke ndị nkatọ
Zinaline Zidane, bụ onye Real Madrid na-ekwu na ndị otu ya nwetara "ohi" ka ha wepụrụ Juventus site na Njikọ Njikọ na Wednesday na-eme ka ọ 'iwe' ọ bụ ezie na ọ bụ "ekworo" sitere na mpụga na ịga nke ọma na Madrid.
NYSC: 2018 Batch A naghị ahapụ akwụkwọ ozi-aga
Nlekọta nke National Youth Service Corps, NYSC, na Sunday gwara ndị òtù na-achọ ịbanye na 2018 Batch A ka a tọhapụrụ.
Argentine Jorge Sampaoli weere icheta Carlos Tevez maka iko ụwa
Onye isi nchịkwa Argentina bụ Jorge Sampaoli na-atụle ịkpọ Carlos Tevez n'òtù egwuregwu mbụ ya maka 2018 FIFA World Cup na Russia, dị ka FOX Sports Argentina.
South Africa dinara 'Mama' Winnie Mandela
South Africa na-agbachitere ichikota apartheid na nwunye Nelson Mandela bu Winnie Mandela na ndi isi na steeti stenum na Soweto on Saturday.
Senate: N30 otu puku ijeri onu ogugu ugwo onu ogugu ego ga-aju ndi Naijiria anya
Onye omeiwu, onye boro ebubo na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa Naijiria adịghị enweta ụtụ ego n'ụzọ dị irè, kwuru na nyocha ahụ ga-eme ka ikike ụlọ ọrụ ahụ nyocha.
'Enweghi ike' n'inye ego nkwado - UN's Miroslav Lajcak
Ụlọ nke iwu nyere iwu ka EFCC jide ya, kpee ikpe maka ọpụpụ-isi obodo ...
Gọvanọ Okorocha: Uche Nwosu ga-eme m karịa gọvanọ
BBNaija: Cee-C dethroned ka Alex na-apụta ọhụrụ Head nke Ụlọ
President Buhari: Ndị ajọ omume mere ka ndị ogbenye ghara ịda ogbenye
UN na-akpọ maka ego zuru ụwa ọnụ maka ndị nọ na DR Congo